यसरी मुटु स्वस्थ राख्नुस् र हृदयघातबाट बच्नुस् | Ratopati
personअञ्जु तामाङ exploreकाठमाडौं access_timeअसोज २०, २०७५ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालमा मुटु रोगीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । सँगै हृदयघात हुनेको संख्या पनि । जसको कारणले धेरैको ज्यान गएको छ । मुटु रोग विशेषज्ञहरुको सल्लाहलाई मान्ने हो भने मुटुलाई स्वस्थ्य राख्न हामीले गर्दै आइरहेको क्रियाकलापमा केही सुधार गरे पुग्छ ।
तर, आधुनिक समयसँगै नेपालीको दैनिक खानपानमा पनि परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । जसले मुटुलाई स्वास्थ्य राख्न चुनौती थपिँदै गइरहेको छ ।
यो कुराले मानव स्वास्थ्य र मुटुमा कस्तो असर पर्छ ? मुटुलाई कसरी स्वस्थ्य राख्ने ? हृदयघात भनेको के हो ? यसबाट बच्ने उपाए र रोकथामको विषयमा शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ज्योतिन्द्र शर्माले जानकारी गराएका छन् ।
दशैँ खानपिन : डाक्टर भन्छन्, ‘रातोभन्दा सेतो मासु खानु’